Kenya oo dib u fureeysa duulimaadkii caalamiga ahaa Maanta - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Kenya oo dib u fureeysa duulimaadkii caalamiga ahaa Maanta
Kenya oo dib u fureeysa duulimaadkii caalamiga ahaa Maanta
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay Maanta oo Sabti ah dib u fureyso duullimaadyadii Caalamig ahaa ee ku xirmay xayiraadaha cudurka Corono Virus.
Wasiirka wasaaradda Gaadiidka iyo kaabayaasha waddooyinka Kenya, James Macharia ayaa sheegay in la oggol yahay oo keliya duullimaadyada ka imaanaya Dalalka, Shiinaha, Kuuriyada Koonfureed, Japan, Canada, Zimbabwe, Itoobiya, Switzerland, Ingiriska, Qatar, France, Netherland, Rwanda, Uganda, Namibia, Morocco, Imaaraatka iyo Gobollada California, Florida iyo Texas oo ka mid ah Dalka Maraykanka.
Mr. Macharia ayaa sheegay Dadka rakaabka ah in lala socon doono xaaladdooda muddo laba Todobaad ah, iyagoo aan la karantiili doonin haddii heerkulkoodu ka hooseeyo 37.5 Digrii Celsius iyo haddii aysan lahayn astaamaha Covid-19ka.
Wasiirka wasaaradda Gaadiidka iyo kaabayaasha waddooyinka Kenya, James Macharia ayaa shirkadaha Diyaaradaha faray in ay Dadka siiyaan qalabka looga hortago cudurka, si aysan rakaabka Diyaaradda saran isu qaadsiin.
Previous articleGoonjeex “Sida kaliya Axmad looga adkaan karo, Jubbaland u soo ceshan karno waa dib u soo noolaynta Dooxada Jubba”
Next articleDowlada Puntland oo kadigtay in DFS aysameesato Mudokororsi